DVB - Sab, 21/05/2022 - 4:37pm
DVB - Sab, 21/05/2022 - 2:40pm
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်မှာ မေလ ၂၁ ရက် မနက် ၉ နာရီလောက်က လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ လူနေအိမ်သွပ်မိုးတွေပျက်စီးပြီး နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းရှိ အုတ်တံတိုင်းတွေ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် မော်လမြိုင်၊ ပေါင်၊ ချောင်းဆုံ ၊ မုဒုံ၊ ရေး စတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ လူနေအိမ်တွေ။ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေ၊ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းနဲ့ စာသင်ကျောင်းတချို့ပါ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ ၂ ဦး လည်းရှိတယ်လို့ လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေက ပြောပါတယ်။
DVB - Sab, 21/05/2022 - 2:31pm
“လေပြင်းကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေက လူနေအိမ် ၅၀ ကျော်လောက်ပျက်စီးသွားတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်နေအိမ်တွေက လေပြင်းတိုက်လို့မပြိုရင်လည်း အားလုံးပြုပြင်ရမယ့် အနေထားတွေမှာရှိတယ်။ နှစ်တွေလည်းကြာပြီ။ ဒီနေအိမ်တွေကလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်ထားကြတာ။”
“မဟာမုနိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာ အရင် လေပြင်းတိုက်လို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့နေအိမ်တွေပါ ပြိုပျက်သွားတာတွေရှိတယ်။ ညောင်ချောင်စခန်းက နေအိမ်တွေက အိုဟောင်းနေတော့ အပြိုအပျက်များပါတယ်။”
DVB - Sab, 21/05/2022 - 2:09pm
မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း ၆၁ လမ်းနဲ့ ၆၂ လမ်းကြားရှိ မြို့နယ် တရားရုံးရှေ့မှာ မေလ ၂၁ ရက် မနက် ၁၁ နာရီကျော် က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တရားရုံးဝင်းရှေ့ရှိ ညောင်ပင်ဘေးမှာ လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံ ထိခိုက်ပျက်စီးတာမရှိသလို လူထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာ မရှိဘူးလို့ သိရ ဒေသခံတွေထံက သိရပါတယ်။
“ဒီနေ့က ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တော့ လူတော့ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ထိခိုက်တာတွေ ဘာတွေမရှိဘူး။ တရားရုံးရှေ့မှာလည်း အတားအဆီးတွေတော့ လုပ်ထားတယ်။” လို့ ရှေ့နေတယောက်က ပြောပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တရားရုံးအနီးမှာ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့မစခန်းရှိတာ ကြောင့် အရပ်ဝတ်လက်နက်တချို့ လာရောက်စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့မစခန်းဟာလည်း မကြာခဏ ဗုံးနဲ့ ပစ်ခံရတာ၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တာ ကြောင့် စခန်းရှေ့လမ်းမှာ Slow Down တွေလုပ်ထားပါတယ်။
DVB - Sab, 21/05/2022 - 2:02pm
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာ မေလ ၂၁ ရက် ဒီ နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်လောက်က မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ ငါးဖမ်းစက်လှေတချို့နစ်မြုပ်ခဲ့သလို မြေပုံမြို့နယ်မှာလည်း ခရီးသည်တင်စက်လှေ (လိုင်းဘုတ်) တစီးနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေထံက သိရပါတယ်။
င/ပသုန်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဘော်ကြီးက “ င/ပသုန် လိုင်းဘုတ်နဲ့ ငါးဖမ်းဘုတ်တချို့ နှစ်မြုတ်တာမှန်ပါတယ်။ လိုင်းဘုတ်က လူအသေအပျောက်မရှိပါ။ အားလုံး ကယ်ဆယ်လို့ရလိုက်ပါတယ်။ ငါးဖမ်းဘုတ်တချို့ပျောက်နေတယ်။ ဖုန်းအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး လိုက်ရှာနေကြဆဲပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
ငါးဖမ်းစက်လှေတွေဟာ မိုးသက်လေပြင်းမိပြီး နောင်တော်ကြီး နောင်တော်ငယ်မြစ်မှာ နှစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအချိန်မီ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့် ခရီးသည်တွေ အသက်အန္တရယ်ကင်းရှင်းခဲ့ကြတာလို့ သိရပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်မှာလည်း ငါးဖမ်းစက်လှေတချို့ နစ်မြုပ်တာရှိတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ အတည်ပြုလို့တော့ မရနိုင်သေးပါဘူး။
လက်ရှိ အဆက်အသွယ်မရဖြစ်နေတဲ့ ငါးဖမ်းစက်လှေတွေ တစီးနဲ့တစီး အချိတ်အဆက်ပြုလုပ်ပြီး လိုက်လံရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
DVB - Sab, 21/05/2022 - 1:51pm
မန္တလေးမြို့က စက်သုံးဆီဆိုင်ကြီးတချို့မှာ အခုရက်ပိုင်း စက်သုံးဆီ ပြတ်တောက်နေတယ်လို့ မန္တလေးမြို့ခံတွေထံက သိရပါတယ်။
တချို့ဆီဆိုင်တွေမှာ 92 အမျိုးအစား စက်သုံးဆီသာရပြီး တချို့ဆီဆိုင်တွေမှာ 92 ရော 95 အမျိုးအစား စက်သုံးဆီပါ မရှိတော့တာကြောင့် ခေတ္တ အရောင်းရပ်နားထားကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
လက်လီရောင်းချတဲ့ ဆိုင်ကြီးတွေမှာ စက်သုံးဆီပြတ်တောက်မှု အနည်းငယ်ရှိလာပြီဖြစ်သလို ဈေးနှုန်းကလည်း မြင့်တက်လက်စဖြစ်နေတဲ့အတွက် မန္တလေးက အငှားယာဉ် မောင်းသူတွေဟာ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
မန္တလေးမြို့နေ အငှားယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက”ကားသမားတွေဘက်ကလည်း ဆီဖိုးအတွက်ပဲ ကုန်နေရသလို ဖြစ်နေတယ်လေ”လို့ ပြောပါတယ်။
မန္တလေးမြို့တွင်းမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကတည်းက စက်သုံးဆီပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပြီး ဆီဆိုင်ဝန်ထမ်းတချို့ကို မေးမြန်းရာမှာ စက်သုံးဆီကား မဝင်သေးတဲ့အတွက် မရရှိသေးကြောင်းနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ စက်သုံးဆီရရှိမယ် ဆိုတာကိုလည်း မသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
စက်သုံးဆီရရှိတဲ့ဆိုင်တွေမှာတော့ ဆီပန့်ကောင်တာကို အနည်းငယ်စီသာဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဆီရောင်းချပေးနေတာကြောင့် ဆီထည့်လိုတဲ့ ယာဉ်တချို့ တန်းစီစောင့်‌ဆိုင်းနေကြရပါတယ်။
လတ်တလောမှာ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်နေတဲ့အပြင် စက်သုံးဆီပြတ်တောက်မှု ပိုမို ဆိုးဝါး လာပါက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရပ်တန့်သွားမယ်လို့ အငှားယာဉ်မောင်းသူတွေက ပြောပါတယ်။ လတ်တလောမှာ ခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့ကားတွေ၊လိုင်းကားတွေ အခက်အခဲ ဖြစ်လာ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စက်သုံးဆီဈေး ဆက်လက်မြင့်မားနေပြီး စက်သုံးဆီ ပြတ်လပ်မှု အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးလာပါက မှောင်ခိုဆီရောင်းချတာ၊ စက်သုံးဆီကို ခွဲတမ်းနဲ့ ဝယ်ရတာ၊ဆီအရည်အသွေး နိမ့်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မော်ဒယ်မြင့် ကားတွေ ဒုက္ခရောက်လာမယ်လို့ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်၊၊
စက်သုံးဆီဈေး ကြီးမြင့်လာသလို ဆီပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလာမယ်လို့လည်း မန္တလေးမြို့ခံတွေက ဆိုပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ခံ တစ်ဦးက “တချို့ဆိုင်လေးတွေဆိုရင် သိပ်လူမစည်တဲ့နေရာတွေဆိုရင် မီးစက် မဖွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်၊မီးစက် မဖွင့်ပေးဘူး၊စားသောက်ဆိုင် တချို့ ဘာညာပေါ့နော်၊လူ သိပ်များတဲ့ ဆိုင်ကြီးတွေကလွဲရင် မီးစက်မဖွင့်ပေးတော့ဘူး၊နောက် ဒုက္ခရောက်မှာက နောက်ထပ် အကြီးအကျယ် ထပ်ပြီးတော့ ကုန်ကျစားရိတ်ကို တောင့်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်မှာက ဟိုတယ်တွေ၊ ဟိုတယ်‌ဆိုတာမျိုးကျတော့ ရပ်လို့မရဘူး၊ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာလေ၊ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတော့ ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ သွားတာဆိုတော့ ရပ်တဲ့ ဟိုတယ်တွေ၊မီးစက်မပေးနိုင်တဲ့ ဟိုတယ်တွေ ရှိလာမယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း ရှိနေပြီ။ မန္တလေးမှာလည်း ရှိနေပြီ၊အဓိကကတော့ ပိုက်ဆံအကုန်အကျခံနိုင်ပြီး တော့ မီးစက်ကို မောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဆီကလွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်မရတော့ဘူး ၊အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေလေ”လို့ ပြောပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်း မန္တလေးမြို့မှာ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ချိန်ဟာ နေ့ခင်းပိုင်းမှာ ပိုမိုများပြား လာကာ တစ်ရက်ကို လေးနာရီခြား တစ်ခါ၊ ရှစ်နာရီခြား တစ်ခါ လျှပ်စစ်မီး ရတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေသလို မီးလာချိန် မမှန်ကန်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေကတည်းက လျှပ်စစ်မီး ရရှိမှု အလွန်နည်းပါးလာတာကြောင့် စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်နဲ့ အခြား လုပ်ငန်းတချို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်မီးစက်နဲ့ လည်ပတ်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက နိုင်ငံတဝန်း စက်သုံးဆီပြတ်တောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလကြောင့် မန္တလေးမြို့က စက်သုံးဆီဆိုင်တွေမှာလည်း သုံးရက်လောက် အလုအယက်ဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းကတော့ စက်သုံးဆီ ပြတ်လပ်မယ့် သတင်းတွေဟာ သတင်းအမှားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ မေ ၂၀ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
စက်သုံးဆီသင်္ဘောတွေဟာ အဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်နေကြောင်း မေ ၂၀ ရက်ကတည်းက တန်ချိန်ပေါင်း ၁၆၄၀၀ သယ်ဆောင်လာတဲ့ MT Beluga Pacific သင်္ဘော၊ တန်ချိန်ပေါင်း ၁၇၂၀၀ သယ်ဆောင်လာတဲ့ MT Yu Hai သင်္ဘော၊ တန်ချိန်ပေါင်း ၁၈၂၀၀ သယ်ဆောင်လာတဲ့ MT Yu Dong သင်္ဘော၊ တန်ချိန်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ သယ်ဆောင်လာတဲ့ Aberlour သင်္ဘောတွေဟာ ဆိပ်ကမ်းတွေမှာ ဆီချနေသလို ပင်လယ်ဝမှာလည်း သင်္ဘော ၄ စီး ထပ်မံဆိုက်ရောက်လာပြီလို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
DVB - Sab, 21/05/2022 - 1:46pm
DVB - Sab, 21/05/2022 - 1:40pm
ပနားမားနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတကတော် ဂျေးဘိုင်ဒင်ဟာ ပနားမားသမ္မတကတော် ကိုလွန်ဒီကော်တီဇိုက အစပြုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ “လေ့လာသင်အံ ကြည့်ရှုနားထောင်ရန်” အစီအစဉ်အကြောင်း လေ့လာဖို့ မေ ၂၀ ရက်က ဒေသခံကျောင်းကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကတော်ဟာ ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိသားစုတွေက ကလေးတွေရဲ့ မျက်စေ့နဲ့နား ကျန်းမာရေးကို အကဲဖြတ်ပုံကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ပညာရေးပါရဂူ ဂျေးဘိုင်ဒင်ဟာ စာသင်ခန်းဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတကတော် ဖြစ်ချိန်ကတည်းကလည်း အင်္ဂလိပ်စာကို ဆက်လက်သင်ကြားပေးနေတာပါ။
သမ္မတကတော်ဟာ အိမ်ဖြူတော်အပြင်ဘက်မှာ ကိုယ်ပိုင်တဦးချင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုတဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေ ၁၉ ရက်က အီကွေဒေါနိုင်ငံကို အလည်အပတ် သွားရောက်ပြီးနောက်မှာ သောကြာနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ ပနားမားကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ပနားမားသမ္မတကတော် ကိုလွန်ဒီကော်တီဇို နဲ့ သူ့သမီးကာရိုလီနာအက်စတာတို့က နိုင်ငံတော်ဧည့်ဆောင်မှာ ပထမဆုံး လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်ဟာ လာမယ့်လ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ အမေရိကန်မှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမယ့် အမေရိကထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ကြားကပဲ ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစည်းအဝေးအတွက် ကျူးဘား၊ နီကာရာဂွာနဲ့ ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ နီကိုလပ်စ်မာဒူရိုတို့ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တွေကတော့ ဖိတ်စာရမှာမဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန်အကြီးတန်းအရာရှိတယောက်က ဧပြီလတုန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
DVB - Sab, 21/05/2022 - 1:32pm
DVB - Sab, 21/05/2022 - 1:08pm
စစ်ကောင်စီရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တဲ့ မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ် တတိယနှစ်ကျောင်းသား ကိုကျော်ညီဇင်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို မေ ၂၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီက မန္တလေး အေးရိပ်ငြိမ် သုသာန်မှာ သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပါတယ်။
မေလ ၂၀ ရက်နေ့က မန္တလေး- မုံရွာကားလမ်းမပေါ် မြင်းမူအကျော်နေရာမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ် တတိယနှစ်ကျောင်းသား ကိုကျော်ညီဇင်ရဲ့ ဦးခေါင်းကို ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကျော်ညီဇင်ဟာ ဆေးတက္ကသိုလ် – မန္တလေး ၊ တတိယနှစ်သင်တန်း (၁၂/၂၀၁၇) က ကျောင်းသား ဖြစ်ပြီး မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူ ခရီးသွားလာနေစဉ် ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ကိုကျော်ညီဇင်ဟာ စစ်ကောင်စီဖွင့်လှစ်နေတဲ့ တတိယနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ် သင်တန်း ( ပုံမှန် ) ကိုလည်း မတက်ရောက်ဘဲ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသား တဦးဖြစ်တယ်လို့ Medical Family Mandalay က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Myanmar News Net - Sab, 21/05/2022 - 11:45am
Myanmar News Net - Sab, 21/05/2022 - 11:18am
The country exported those rice to 22 countries including Cameroon, China, Angola, the Philippines and Poland, while it exported the broken rice to eight countries including Belgium, China and Spain, official data showe
Myanmar News Net - Sab, 21/05/2022 - 9:00am
"Our sources on the ground have just informed us that the base has been taken." The fighting was intense, and the junta even launched multi
Irrawaddy - Sab, 21/05/2022 - 5:31am
Also this week, the regime praised China asamodel neighbor and warned the Arakan Army its patience has limits as the junta’s relations with the group continued to sour.
The post Junta Watch: A Softer Tone to Woo Teachers Back; Harsh Words for the UN, and More appeared first on The Irrawaddy.
DVB - Ven, 20/05/2022 - 6:24pm
Democratic Voice of Burma - Ven, 20/05/2022 - 6:15pm
Myanmar News Net - Ven, 20/05/2022 - 6:05pm
YANGON, May 20 (Xinhua) -- The number of COVID-19 cases in Myanmar rose to 613,203 after 17 new cases were reported in the past 24 hours, the Ministry of Health's official data showed on Friday.
The ministry's health authorities tested 8,794 people for COVID-19 in the past 24 hours, and the daily positivity rate was 0.19 percent, it said.
According to official data, the death toll from COVID-19 in the cou
Myanmar News Net - Ven, 20/05/2022 - 4:40pm
As bickering couples and parents of siblings will know, this happens in daily life all too often. "You lied about where you were last night!"aperson feeling wronged will say. To which, instead of owning up,
DVB - Ven, 20/05/2022 - 4:06pm
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီမြို့မှာ စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလို့ ဖမ်းဆီးခံရသူ လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ငပလီဒေသခံ လူငယ်တယောက်ကို မေလ ၂၀ ရက်မှာ သံတွဲမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီမှာ သံတွဲဒေသခံတယောက်က စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစဉ်မှာ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင် ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ သွားရောက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ကိုဟန်မျိုးသူရိန်ကို ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီး တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ ကိုဟန်မျိုးသူရိန်ကို သံတွဲမြို့နယ် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ် လိုက်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ အစ်မဖြစ်သူ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်မျိုးသင်ဇာထွန်းက ပြောပါတယ်။
“ကိုဟန်မျိုးသူရိန်ကို ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ချမှတ်ပါတယ်။ အလုပ်တော့မပါဘူး။ ချုပ်ရက်တွေကို ထုတ်နုတ်ခံစားခွင့်ရှိတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
ငပလီဒေသခံ ကိုဟန်မျိုးသူရိန်ကို လူစုလူဝေးဖြစ်အောင် ဦးဆောင်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ သံတွဲမြို့နယ် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချမ်းမင်းလတ်က တရားလိုလုပ်ကာ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဟန်မျိုးသူရိန်ဟာ ဒေသတွင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူခဲ့သူဖြစ်သလို NGO အဖွဲအစည်းတွေမှာလည်း လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေကို ပို့ချပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
DVB - Ven, 20/05/2022 - 3:57pm